वाईसियल सेलाएको छैन, बौद्धिक युवा शक्तिलाई समेट्दै छौँः संयोजक ढुंगाना (भिडियो) | KTM Khabar
२०७३ चैत्र ४ गते १७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । तत्कालिन माओवादी पार्टीको भातृ संगठन हो वाईसियल । जतिबेला माओवादी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यसपछी पार्टीको सामाजिक गतिविधिमा विशेष गरी युवा संगठनको रुपमा आफ्नो सक्रियता देखाईरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अहिले वाईसियल गतिविधि कस्तो छ ? भन्ने विषयगत कुराकानीमा केन्द्रित रहेर वाईसियल स्वयम सेवक परिचालन संयोजक सुबित ढुंगानासंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले वाईसियलको गतिविधि कस्तो छ ?
वाईसियलको गतिविधि अहिले पनि दु्रत गतिमा नै लागि रहेको छ । वाईसियल मात्र हैन समग्र युवाहरुलाई कसरी राजनीतिमा लगाउन सकिन्छ ? र युवाहरुलाई कसरी नयाँ मुभमेन्टमा लैजान सकिन्छ ?, राजनीतिमा कसरी ठाउँ प्रदान गर्न सकिन्छ ? भन्ने हिसाबले लागिरहेको छ । अब हाम्रो बैशाख ९, १० र ११ गते महाधिवेशन छ । त्यसको गृहकार्यमा हामी जुटिरहेका छौँ ।
तुलनात्म रुपमा वाईसियलको गतिविधिहरु पहिला भन्दा अहिले सक्रियता कम गरेको हो ?
हैन, हामीले हाम्रो आन्तरिक कामहरु मिलाई रहेको छौँ । गृहकार्य भईरहेको छ । सांगठनिक गतिविधिहरु विस्तार गरिरहेका छाँै । विभिन्न राजनैतिक दस्ताबेजहरु बनाईरहेका छौँ । अझ उत्साहका साथ काम गर्नका निम्ति होमवर्क गरिरहेका छौँ ।
यति बेलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हरेक परिवर्तनमा युवा नै अगाडी आउँछन तर राजनैतिक ठाउँ चाही युवाहरुलाई छैन । त्यस हिसाबले गर्दा युवाहरुलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ ? र विशेष गरी अहिलेका बौद्धिक युवा शक्तिलाई राजनीतिमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ ।
पार्टी भित्र यहाँहरुको भुमिका कस्तो हुन्छ ?
भुमिका भनेको नेतृत्वलाई सहि सुझाव दिने । युवाहरुलाई राम्रोसंग परिचालन गर्ने, जनतालाई सार्वजनिक संविधानको बारेमा जानकारी गराउँने र विशेष गरी पार्टी नेतृत्वलाई राम्रोसंग काम गर्नलाई दबाव दिने कुरामा हाम्रो पहल तथा भुमिका छ ।
सुबित ढुंगानासंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीको लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः